DHAGEYSO:- Isqab-qabsiga ka dhex taagan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DHAGEYSO:- Isqab-qabsiga ka dhex taagan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir
Isqab-qabsi muran ayaa ka taagan cidda sida rasmiga ah uga hadli karto arrimaha ammaanka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, kadib markii ay isku dhaceen labada afhayeen ee wasaaradda amniga gudaha iyo kan maamulka gobolka Banaadir.
Labada afhayeen ayaa midkastaba dhiniciisa waxa uu ka sheeganayaa inuu xaq u leeyahay inuu shacabka uga warbixiyo dhacdooyin maalmeedka amaan-darro ee ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Dowladda federaalka Soomaaliya oo ay hay’ad kasta u sameeysatay afhayeeno nacam-leeyayaal ah oo haatan iyagii isku jeestay ayaa xayeesiiya kaliya mas’uuliyiin xilkooda gudan waayay, waxayna tani ka mid tahay xaaladaha ay soo kordhisay dowladda waqtigeedu sii dhamaanayo ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud.
Labadaan afhayeen ee wasaaarada amniga gudaha Cabdi Kaamil Macalin Shukri iyo kan maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa hadalo kulul isku dhaafsaday dhinaca warbaahinta, wuxuuna mid kasta ku dooday in kaligii uu xaq u leeyahay ka hadalka amni darrada iyo qaraxyada ka dhaca gobolka Banaadir.
Waxa uu mid waliba ku doodaya inuu isaga keligii xaq u leeyahay inuu ka hadlo dadka qaraxyada lagu dilo iyo dhibaatada ka taagan amni darrada magaalada Muqdisho, taas oo aanay jirin cid u damqaneeysa dadka masaakiinta ah ee ku dhex dhimanaya qaraxyadaas.